खड्ग प्रसादको ‘कू’ देशको लागि दुरगामीको भयंकर खड्ग बन्दै - खड्ग प्रसादको ‘कू’ देशको लागि दुरगामीको भयंकर खड्ग बन्दै -
खड्ग प्रसादको ‘कू’ देशको लागि दुरगामीको भयंकर खड्ग बन्दै
मिन बहादुर सुनुवार ‘सुमन’ ६ पुष २०७७, सोमबार
हिजो बिहान चिसो सिरेटोको स्पर्शले कान बोधो जस्तै भएको थियो । दिउँसो पनि दिन धुम्म थियो । त्यसैले, केही कुरा स्पष्ट गरि सुन्न निकै हम्मेहम्मे थियो । किनकि सुन्ने कान चिसोले गर्दा सजिलो गरि सुन्न सक्ने अवस्थामा थिएन । दिन ढल्कँदै जादै थियो साझमा अस्पष्ट रुपमा एउटा हल्ला गाइगुइ सुने । के रछ त बुझ्न मन लाग्यो । लाटिएको कानले झट्ट सुन्न गए ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर शितल निवास जाँदै ।’
ओहो ! यो हल्ला मात्र हो कि साच्चै नै हो । म रनभुल्लमा परे । तर प्रधानमन्त्रीको शितल निवास प्रवेशको गाइगुइ हल्ला भने सबैतिर छिल्लबिल्ल भैसकेको थियो । सबै चकित भए । पत्याउनै नसकिने घटना थियो । किनभने पीएमले त्यो संसद भवन विघटन गर्दैछन्, जसले प्रधानमन्त्रीलाई जन्मायो । अनि जसले प्रधानमन्त्रीको रुपमा करोडौं नेपालीलाई समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली बनाई छाड्छु भन्ने कसम खाएका थिए । त्यो संसदको हत्या पीएमले कसरी गर्न आँट गर्छन ?
नभन्दै शितल निवासमा पुगेर ओलिबाले संसद विघटनको प्रस्ताव गोजिबाट फुत्त मात्र के निकालेका थिए, हत्त न पत्त राष्ट्रपतिज्यूले पास एकैछिनमा गरिदिए । अनि संसद विघटनको सूचना पनि निकाली दिए । साथै बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि सर्वसाधारण जनता अनि राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित सबैलाई चुनावको तयारीमा रहनका लागि सूचना प्रकाशित सम्म गर्न भ्याए । हिजोको दिनभरिको ताततातो खबर यस्तै थियो ।
तर, यो खबरले जनताको मन भने नराम्ररी भाँचिएको छ । विश्वासहरु ऐना झै चर्किएका छन् । दुस्खद घटना भन्ने मुख तितो भएको छ भने उक्त कुरा सुन्ने कान पुरै लाटिएको अनुभव भएको छ । र, सर्वसाधारण जनता अब यो संश्लेषण गर्न स्थितिमा पुगे कि वास्तवमा नेपालको राजनीति एउटा फोहोरी खेल मात्र भयो ।
तर मनन गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीति फोहोरी खेल होइन । यो राष्ट् भित्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको निकास दिने मूल नीति हो । तर, राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउँने जनता पक्कै होइनन् । किनभने जबसम्म देशमा खड्ग प्रसाद जस्ता नेतृत्वहरु हुन्छन् , तबसम्म राजनीति एउटा दुर्घन्धित खेल भन्दा अरु केही हुन्न । नेतृत्वको यही अदुर्दशी, प्रतिगामी र राष्ट्रघाति कूले जनता आक्रान्त छन् । यस्ता संकी र घमण्डी नेतृत्वलाई सोझा–साझा नागरिकले कहिलेसम्म झेक्नु ।
आज जनता विभिन्न प्रश्नहरुको चेपुवामा परेका छन् । किनकि जनतासँग मात्र प्रश्नहरू छन् । पटकपटक नेपाली जनताले भोगेको असंभवैधानिक ुकूु किन र के कारणले सिर्जना भएका हुन् त ? महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, गिरिजा प्रसाद अनि खड्ग प्रसादसम्मले गरेका ‘कू’ किन अनि के का लागि ? के जनताको लागि नै हो त ? अवश्य पनि होईन । यी शासक अनि सरकारप्रमुख भनौदाले गरेका अनेकन असंवैधानिक र अराजनीतिक ‘कू’ नेपाली जनताको खातिर नभई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ, घमण्ड अनि व्याक्तिगत लाभको पराकाष्ठा हो ।
तसर्थ, खड्ग प्रसादले निर्ममता पूर्वक गरेको निर्वाचित संसदको असंवैधानिक ुकूु विगतका ज्ञानेन्द्र महाराजले गरेको कू भन्दा फरक बिलकुल छैन । त्यसकारण, खड्ग प्रसादको शासक भन्ने तिव्र इच्छा, घमण्ड अनि व्याक्तिवादी सोचको निर्ल्लज परिणाम हो आजको उनले गरेको कू । जुन सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो र त्यो को बहानामा किमार्थ स्वीकार्य छैन । किनभने जनताको भोट पाएर खड्ग प्रसाद प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि, जनतालाई अनेकन सपना र आश्वासनहरुको आकाश देखाए । जुन सपनाको आकाशले आज जनतालाई बिस्तारै बिस्तारै थिच्दैछ ।
तर, जुन संसदबाट जनताको समृद्धिको गफ हाकेका थिए, आज खड्ग प्रसादले त्यहीँ संसदको हत्या गर्नसमेत पछी परेनन् । तसर्थ, गणतन्त्र र संघीयता चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको नाजुक अवस्थामा खड्ग प्रसादको ‘कू’ को बाटो रोज्नु निकै घातक छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओलिबा होइनन् । यिनि खड्ग प्रसाद हुन् । निकम्मा र डरछेरुवा हुन् । भलै आफ्नो पार्टीमा केही असमझदारी बढ्दै गर्दा, आफू सोर्ह आना नै सहि हुँदाहुँदै पनि चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको महसुस भएमा आफू प्रधानमन्त्री एवं दलको अध्यक्ष भएको हुँदा पार्टीमा बहस गर्नु सट्टा, संघर्ष गर्न छोडेर अनि जनतालाई यथार्थ कुराले छर्लङ्ग पार्न नसकेर खड्ग प्रसादले ‘कू’ को सहारा लिन पुगे । संसद विघटन गरे । के यो नै हो आफुलाई राजनेता हु भन्नेको महान कार्य ?
यहि आधारमा भन्न सकिन्छ कि खड्ग प्रसाद जाली हुन् । धोखेबाज हुन् । संकी र देशको लागि घाँडो व्यक्ति हुन् । आफ्नो व्याक्तिगत सनकको कारण देश र जनताको समृद्धिको सपनालाई चकनाचुर पार्ने गद्दार हुन् । आज चुनावको नाटक मंचन गर्दै खड्ग प्रसाद जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दैछन् । देशलाई अस्तव्यस्त बनाउँदैछन । त्यसकारण, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताले खड्ग प्रसादलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । के व्याक्तिगत क्रोध र सनकको कारण संसद विघटन गर्न मिल्छ ? संसद विघटन व्याक्तिगत स्वार्थका लागि कि जनताको लागि हो ? के समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको संकल्प पूरा भयो ? ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ र खड्ग प्रसाद्को ‘कू’ उस्तै हैन र ? के नेपाल जस्तो गरिब देशले पटकपटकको चुनाव खर्च कसरी धान्न सक्छ ? अनि तिमी कुन अनुहार लिएर जनताको अगाडि भोट माग्न आउँछौ ?
पक्कै पनि खड्ग प्रसादसँग जनताको एकएक सवालको जवाफ छैन । उनको एउटै जवाफ हुनसक्छ (षड्यन्त्रलाई चिर्नका लागि संसद विघटन । तर, यो प्रगिगामी कदम हो । खड्ग प्रसादको असंवैधानिक कदमले आज विस्तारै हुर्कदै गरेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता खतरामा छ । त्यसकारण, शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक समाज, व्यवसायी, बुद्धिजिवि साथै सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो प्रतिगामी र असंवैधानिक ुकूु को गम्भीर रुपमा भन्डाफोर गरौं । किनभने खड्ग प्रसादको ‘कू’ देश र जनताको लागि भयंकर खड्गको रुपमा देखापरेको छ । यो जनादेशको विरुद्धमा छ ।